ABOUT US – DAE Myanmar
Myanmar’s interest in nuclear energy for peaceful purpose is longstanding. As early as 1956, an atomic Energy Division was established in the Union of Burma Applied Research Institute (UBARI).
The UBARI was recognized as the Central Research Organization (CRO) which again gotachance to the new name of Myanmar Scientific and Technological Research Department (MSTRD). Until 1997, the AEC existed all along asadivision under the UBARI, CRO and MSTRD. In 1997, DAE was established asanew seperate Government Department by combining the Atomic Energy Research Department and the Research Policy Direction Board.
Myanmar joined the International Atomic Energy Agency(IAEA) in 1957. It has been an active member of that organization and has benefited from scholarships and training programme of the IAEA. Myanmar nationals have been trained by the IAEA in the application of nuclear technology for peaceful purposes. Myanmar acceded to the Non-Proliferation Treaty(NPT) in December 1992.
In April 1995, Myanmar signed the Safeguards Agreement with the IAEA. In this age of globalization it is imperative that developing counties such as Myanmar must explore all possible avenues to promote development for our peoples.
The Myanmar Government is striving to acquire modern technology in all fields, including maritime, aerospace, medical and nuclear. In Myanmar the application of nuclear technology remains limited. The constraint is due mainly to the fact that isotopes have to be imported.
In the circumstance, when the new ministry of Science and Technology was set up in October 1996, ways and means to overcome the constraints to the peaceful use of nuclear energy were explored.
Department of Atomic Energy (DAE) was established as Department under the Ministry of Science and Technology in 1997 to carry out research, development and training in the field of atomic energy and to ensure the safety of the radiation sources and the protection from nuclear radiation hazards. With these new establishments Myanmar efforts for development and applications on nuclear science and technology have started DAE.
The DAE has its roots in the Union of Myanmar Atomic Energy Centre(UBAEC) established in 1955 asadivision under the Union of Burma Applied Research Institute (UBARI). The DAE have been trying to develop and promote peaceful uses of nuclear technology with the help of IAEA.
အဏုမြူသုတေသနဌာနကို ၁၉၅၅ခုနှစ်တွင် မြန်မာ့အဏုမြူစွမ်းအင်ဗဟိုဌာန (Atomic Energy Center-AEC) အဖြစ် မြန်မာနိုင်ငံလက်တွေ့ အသုံးချသုတေသနဌာန၏ ဌာနခွဲကြီးအဖြစ် ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။ ထိုစဉ်ကအဏုမြူဓာတ်ပေါင်းဖို (Nuclear Reactor) တည်ဆောက်နိုင်ရေး အထိရည်မှန်းခဲ့ပြီးသီးခြားဌာနတစ်ခုအဖြစ် ယခုလှိုင်တက္ကသိုလ်နယ်မြေတည်ရှိရာ မြေ(၈၇)ဧက ပေါ်တွင်တည်ထောင် ရန်စီမံခဲ့ပါသည်။
အဏုမြူစွမ်းအင်ဗဟိုဌာနသည်မြန်မာနိုင်ငံလက်တွေ့အသုံးချသုတေသနဌာနအောက်တွင် ဆက်လက်ရှိနေခဲ့ပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံလက်တွေ့အသုံးချသုတေသနဌာနကိုဗဟိုသုတေသနလုပ်ငန်း အဖွဲ့ (Central Research Organization-CRO) အဖြစ်ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီးယင်းအဖွဲ့ကို မြန်မာ့ သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာသုတေသနဦးစီးဌာန(Myanma Scientific and Technology Research Department-MSTRD) အဖြစ် အဆင့်ဆင့်ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ရာ အဏုမြူစွမ်းအင်ဗဟိုဌာနသည် သုတေသနဌာနတစ်ခုအဖြစ် အစဉ်ရပ်တည်ပါဝင်ခဲ့ပါသည်။
မြန်မာ့အဏုမြူစွမ်းအင်ကော်မတီ (Myanma Atomic Energy Committee)
၁၉၅၅ခုနှစ်တွင်အဏုမြူစွမ်းအင်ဗဟိုဌာန(Atomic Energy Center-AEC)ကိုဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီး မြန်မာနိုင်ငံကိုယ်စားယင်းဌာနမှ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာတွင် အဏုမြူစွမ်းအင်ရေးရာကိစ္စများကို တက်ကြွစွာပါဝင်ဆွေးနွေးခြင်း၊လေ့လာခြင်းပြုခဲ့ပါသည်။ ၁၉၅၇ခုနှစ်တွင်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအဏုမြူစွမ်းအင်အေဂျင်စီ (International Atomic Energy Agency-IAEA)ကို စတင်ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ရာတွင် မြန်မာနိုင်ငံသည် အခြေပြုအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံ (founding Member) အဖြစ် ဦးဆုံးပါဝင်ခဲ့ပါသည်။
ထိုအချိန်မှစပြီး အဏုမြူစွမ်းအင်ဗဟိုဌာန သည် IAEA နှင့်မြန်မာနိုင်ငံဆက်သွယ်ဆောင်ရွက် ရာတွင်တာဝန်ခံ (focal) အဖွဲ့အစည်းဖြစ်ခဲ့ပါသည်။ အဏုမြူစွမ်းအင်ဆိုင်ရာ ကိစ္စများကို ကြီးကြပ် ညှိနှိုင်းပေးရန်အတွက်၁၉၇၅ခုနှစ်၊ ဇွန်လ(၁၃)ရက်နေ့စွဲပါအမိန့်ကြော်ငြာစာဖြင့် စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေး ဝန်ကြီးဌာနအောက်ရှိ သုတေသနလုပ်ငန်းများဆိုင်ရာမူဝါဒညွှန်ကြားရေးအဖွဲ့မှ “အဏုမြူစွမ်းအင်ကော်မတီ” ကိုဖွဲ့စည်းပေးခဲ့ပါသည်။ ဥက္ကဌအဖြစ်အမှတ်(၂) စက်မှုဝန်ကြီးဌာန ဝန်ကြီးအား တာဝန်ပေးခဲ့ပါသည်။
ထိုမြန်မာ့အဏုမြူစွမ်းအင်ကော်မတီကို၁၉၇၈ခုနှစ်တွင်ကျန်မာရေးဝန်ကြီးဌာနဝန်ကြီးအားဥက္ကဌအဖြစ်တာဝန်ပေး၍ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။နိုင်ငံတော်ငြိမ်ဝပ်ပိပြားမှုတည်ဆောက်ရေးအဖွဲ့အစိုးရလက်ထက်တွင်အဏုမြူစွမ်းအင်ကော်မတီကိုပညာရေးဝန်ကြီးဌာနဒုတိယဝန်ကြီးအားဥက္ကဌတာဝန်ပေးပြီးပညာရေးဝန်ကြီးဌာနမှ၁၉၉၂ခုနှစ်၊သြဂုတ်လ(၁၁)ရက်နေ့စွဲပါအမိန်ကြော်ငြာစာဖြင့်လည်းကောင်း၊၁၉၉၄ခု၊နိုဝင်ဘာ (၂၂)ရက်နေ့စွဲပါအမိန့်ကြော်ငြာစာဖြင့်လည်းကောင်း ပြန်လည်ဖွဲ့စည်း ပေးခဲ့ပါသည်။ မြန်မာ့အဏုမြူစွမ်းအင်ကော်မတီက ချမှတ်သောမူဝါဒနှင့် လုပ်ငန်းများကို အဏုမြူစွမ်းအင်ဗဟိုဌာန မှတာဝန်ခံအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ပါသည်။
အဏုမြူစွမ်းအင်ဗဟိုဌာနသည်(၁၉၉၆) ခုနှစ် သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာန ဖွဲ့စည်းချိန်တွင် မြန်မာ့သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာသုတေသနဦးစီးဌာန(MSTRD) ၏ ဌာနတစ်ခုအဖြစ်ဆက်လက် တည်ရှိ နေပါသည်။ သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနအားဝန်ကြီးဌာနအသစ်အဖြစ်ဖွဲ့စည်းပေးခဲ့ပြီးဖြစ်၍အဏုမြူစွမ်းအင်ဆိုင်ရာနည်းပညာရပ်ဖွံ့ဖြိုးရေးကိုထိရောက်စွာဆောင်ရွက်သွားရန်နှင့်အဏုမြူဓာတ်ရောင်ခြည်အန္တရာယ်ကာကွယ်ရေးလုပ်ငန်းကိုလည်းစနစ်တကျဆောက်ရွက်နိုင်ရန်အတွက် “အဏုမြူစွမ်းအင်ဦးစီးဌာန” ကို၁၉၉၇ခုနှစ်၊ဇူလိုင်လ (၂)ရက်နေ့တွင်ကျင်းပသော ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရအဖွဲ့ အစည်းအဝေးအမှတ်စဉ် (၂၅/၉၇) ၏သဘောတူခွင့်ပြုချက်အရအရာထမ်းရာထူး(၉၆)နေရာ၊ အမှုထမ်း ရာထူး(၁၁၈)နေရာ၊ စုစုပေါင်းရာထူး(၂၁၄)နေရာဖြင့်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီး အမှတ်(၆) ကမ္ဘာအေးဘုရားလမ်း၊ ရန်ကုန်မြို့ (MSTRD ဝင်းအတွင်းတွင်) ရုံးစိုက်ခဲ့ပါသည်။
၂၀၁၅ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ(၁၅)ရက်နေ့တွင် ကျင်းပသည့် ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ အစည်းအဝေး အမှတ်စဉ် (၂/၂၀၁၅)မှလည်း ထပ်မံ သဘောတူခွင့်ပြုခဲ့ပါသည်။
နိုင်ငံတော်အေးချမ်းသာယာရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီ၏ ဥပ‌ဒေအမှတ် (၈/၉၈)ဖြင့် အဏုမြူ စွမ်းအင်ဥပဒေကို ၁၉၉၈ ခုနှစ် ဇွန်လ ၈ ရက်နေ့ ပြဋ္ဌာန်းခဲ့ပြီး အဆိုပါဥပဒေအရ အဏုမြူစွမ်းအင် ကောင်စီအား သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာန ဝန်ကြီးမှ ဥက္ကဌအဖြစ်လည်းကောင်း၊ အဏုမြူစွမ်းအင် ဉီးစီးဌာန ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်မှ အတွင်းရေးမှူးအဖြစ်လည်းကောင်း ဖွဲ့စည်း တာဝန်ပေး အပ်ခဲ့ ပါသည်။
သို့ရာတွင် (၂၀၁၆)ခုနှစ် ဇူလိုင်လ (၇)ရက်နေ့တွင် ကျင်းပသော ပြည်ထောင်စု မြန်မာ နိုင်ငံတော် အစိုးရအဖွဲ့အစည်းအဝေးအမှတ်စဉ် (၇/၂၀၁၆) ၏ သဘောတူခွင့်ပြုချက်အရ အရာထမ်း ရာထူး(၉၅)နေရာ၊ အမှုထမ်းရာထူး(၁၁၈)နေရာ၊ စုစုပေါင်း ရာထူး(၂၁၃)နေရာ ဖြင့် ပညာရေး ဝန်ကြီးဌာန၊ စက်မှုနည်းပညာမြှင့်တင်ရေးနှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဉီးစီးဌာနတွင် အဏုမြူ စွမ်းအင်ဌာနအဖြစ် ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။
ယခုအခါ အဏုမြူစွမ်းအင်ဌာန (ရုံးချုပ်)သည် ရုံးအမှတ်(၂၁) နေပြည်တော်တွင် တည်ရှိပြီး၊ ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများနှင့် သုတေသနလက်တွေ့ခန်းများသည် အမှတ်(၁၂၃) နတ်မောက်လမ်း ရန်ကုန်မြို့တွင် တည်ရှိပါသည်။ ရန်ကုန်မြို့ မှော်ဘီမြို့နယ်ရှိ စမ်းသပ်စက်ရုံစုဝင်းအတွင်းတွင် အဏုမြူစွမ်းအင်ဌာန၏ Nuclear Research Building အား တည်ဆောက်ထားရှိပြီး အဏုမြူစွမ်းအင်ဌာနရှိ သုတေသနလက်တွေ့ခန်းများ ထားရှိရန် ဆောင်ရွက်နေပါသည်။
နိုင်ငံသားတို့၏ လူမှုစီးပွားဘဝများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာစေရေးအတွက် နျူကလီးယား နည်းပညာကို နယ်ပယ်အသီးသီး၌ ငြိမ်းချမ်းသော ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် အသုံးချ ဆောင်ရွက်သွားမည်။
နျူကလီးယားနည်းပညာကို အသုံးချရာတွင် လူနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အား နျူကလီးယား နှင့် ဓာတ်ရောင်ခြည် ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးနှင့် လုံခြုံရေးအတွက် စီမံဆောင်ရွက်သွားမည်။
နိုင်ငံတွင်း နျူကလီးယားနည်းပညာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာစေရေး၊ လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ် ဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့် စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်ခြင်းတို့အတွက် ပြည်တွင်းပြည်ပအဖွဲ့အစည်း များ နှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမည်။
ဌာန၏လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုများကို ရေရှည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန်အတွက် ကဏ္ဍအလိုက် မူဝါဒများ ချမှတ် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်သွားမည် ဖြစ်ပါသည်။
နျူကလီးယားနှင့်ဓာတ်ရောင်ခြည်ကို အသုံးချရာတွင် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစံနှုန်းများ၊ စည်းမျဉ်းစဉ်းကမ်းများ၊ အခြေခံလိုအပ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီစေရေးအတွက် အကောင် အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်သွားမည်။
မြန်မာနိုင်ငံက အတည်ပြုပါဝင်ထားသည့် နျူကလီးယားဆိုင်ရာ သဘောတူညီချက် များကို ဖြည့်ဆည်းဆောင်ရွက်နိုင်ရေးအတွက် သက်ဆိုင်ရာဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်း ဆောင်ရွက်သွားမည်။
လိုအပ်သည့်ဥပဒေ နည်းဥပဒေနှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို သုံးသပ်၍ ခေတ်နှင့်အညီ ပြင်ဆင်ရေးဆွဲခြင်းများကို အစဉ်ဆောင်ရွက်နေမည်။